Chii chinorehwa nehukuru hwemasokisi e32, 34, 36 pane Aliexpress? | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Ndezvipi masikirwo emabhonji 32, 34, 36 paAliexpress zvinorevei?
Ichi chikamu cheyero chakauya kwatiri kubva kuAmerica. Aya manhamba anoratidza ukuru hwechitenderera chemuviri pasi pezamu remusikana. Kuyerwa inches. Iyo inch inenge 2.54 cm.Nhamba idzi dzinogona kushandurwa zviri nyore uye sarudza hukuru hunokodzera iwe.
Kazhinji, aya anogamuchirwa bra saizi ndeye yekutanga, yechipiri, yechitatu, yechina uye saizi 32, 34, 36 uye A, B, C, D anoshandiswa kuAmerica. Sekuziva kwangu pane webhusaiti yeAliexpress saizi dzeiyo bra inosunga 32, 34, 36 zvinoreva vhoriyamu yemazamu, uye kuyera zvikamu zveinch.
Kuongorora saizi yemabhureki paAliexpress webhusaiti yakapusa, nekuti aya masayizi anoratidzwa mune yeAmerican fomati.
Kuti ujekese, shandisa ndiro iyi pano, pane ese mashanduro anodudzirwa muRussia chimiro:
Iyo webhusaiti yeAliexpress online chitoro inoshandisa saizi dzeAmerica. Izvo zvinoshanda kune zvese zvevana uye kune vakuru. Izvo zviyero zveiyo bra 32, 34, 36 zvinoreva hupamhi hwegirth pasi pechipfuva. Uye kana uchisarudza saizi yehukuru, iwe unofanirwa kufunga nezvemamwe ma paramita. Unogona kuverenga zvakawanda zvakadzama apa izvi saiti. Uye usakanganwa kuverenga wongororo yezvigadzirwa sezvo hukuru uye hunhu hwezvinhu zvakatengeswa zvinogona kusiyana.
Saizi 32, 34, 36 zvinoreva obkhat pasi pechipfuva. Unogona kuverenga zvakawanda nezve izvi zvese zviri pawebhusaiti: http://fashiony.ru/page.php?id_n=92912. Inotaurawo nezveese mavara uye humwe huwandu hwehuwandu hunogona kunge huri, hunowanzo kushandiswa pane eAmerica online bra zvitoro.
Chinhu chinonyanya kukosha ndechekuti masentimendi akarara pasi, asi kwete akasimba. Iwe unofanirwa kuve wakasununguka. Maoko anofanira kuderedzwa pasi. Nenzira, pamatepi mazhinji ekuyera kune maviri ma inches uye masentimita. Kana iwe ukawana 31 inch, saka saizi yako ichava 30 kana 32, nezvimwe.
Pamusoro pemwedzi ye1,5 yakapfuura ini ndakaraira pasinhi bhurandi ine saizi yeiyo tii pa36, inoenderana neRussia 80, ndakaigamuchira nezuro, inodzvinyirira zvishoma, ikozvino ndoziva kuti ndinoda kuraira zvishoma. Kutenda kune wese kune mhinduro. Ndizvozvo, ukuru huri mumasendimita.
Mibvunzo ye62 mu database yakagadzirwa mu 0,277 masekondi.